रिलायन्स फाइनान्सको मुनाफा ३७.३१ प्रतिशतले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति ? « नेपालबहस
अस्पतालएमालेकेपी ओलीकोरोना भाइरसनेकपानेपाल प्रहरीनेपाली कांग्रेसप्रचण्डप्रहरीशेयरबजार
रिलायन्स फाइनान्सको मुनाफा ३७.३१ प्रतिशतले बढ्यो, वितरणयोग्य मुनाफा कति ?
प्रकाशित मिति : १० बैशाख २०७८, शुक्रबार ०७:३९
१० बैशाख, काठमाडौं । रिलायन्स फाइनान्स लिमिटेडले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाससम्मको अपरिष्कृत वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ। वित्तीय विवरण अनुसार फाइनान्सको मुनााफा बढेको हो ।
तेस्रो त्रैमासम्ममा फाइनान्स कम्पनीको मुनाफा ३७.३१ प्रतिशतले बढेर ८ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ। त्यस्तै, ब्याज आम्दानी भने ३३.०६ प्रतिशत घटेर १० करोड ७१ लाख रुपैयाँमा सीमित भएको छ।
ब्याज आम्दानी घटेपनि अन्य सञ्चालन आम्दानी बढेका कारण फाइनान्सको मुनाफा बढ्न पुगेको हो। समीक्षा अवधिमा कम्पनीको अन्य सञ्चालन आम्दानी ३९ लाख रुपैयाँबाट बढेर १३ करोड ६८ लाख रुपैयाँ पुगेको छ।
चैत मसान्तसम्ममा फाइनान्सको वितरणयोग्य मुनाफा १० करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ। जुन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १ हजार १८.७२ प्रतिशत बढी हो। समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको सञ्चालन मुनाफा ३७.३१ प्रतिशत बढेको छ।
मुनाफासँगै फाइनान्सको प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि सुधार भएको छ। समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको यस्तो आम्दानी ३ रुपैयाँ ७८ पैसा बढेर १३ रुपैयाँ ९१ पैसा पुगेको छ। चैत मसान्तसम्ममा फाइनान्सको मूल्य आम्दानी अनुपात २१.०७ गुणा रहेको छ भने प्रतिशेयर नेटवर्थ १५५ रुपैयाँ ३२ पैसा रहेको छ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा फाइनान्सको चुक्ता पूँजी स्थिर रहेको छ भने जगेडा कोष ९४.११ प्रतिशत बढेको छ। समीक्षा अवधिमा फाइनान्सको निक्षेप १८.४५ प्रतिशत बढेको छ भने कर्जा १६.३९ प्रतिशत बढेको छ।
कर्जा लगानी बढेपनि फाइनान्सको निष्क्रिय कर्जा भने घटेको छ। गत आर्थिक वर्षको चैत मसान्तको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिसम्ममा फाइनान्सको यस्तो कर्जा ०.७५ प्रतिशतविन्दु घटेर १.८८ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
नेपाल फाइनान्स र ललितपुर फाइनान्सले असार २७ गतेदेखि एकीकृत कारोबार सुरु गर्ने
मल्टीपर्पस फिनान्स कम्पनीले बोलायो साधारण सभा
मञ्जुश्री फाइनान्सको मुनाफा ९४.१६ प्रतिशत बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानीमा पनि सुधार
नेप्सेमा मञ्जुश्री फाइनान्सको बोनस शेयर सूचीकृत
अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई स्थायी बनाउने इराकी प्रधानमन्त्रीको भनाइ
बङ्गलादेशमा कोरोना संक्रमितहरु भेटिने क्रम बढ्दै
भारतमा ४४ हजार संक्रमित थपिए, ५५५ जनाको मृत्यु
अमेरिकामा काेराेना खोप लगाउने प्रतिव्यक्तिलाई सय डलर !
पूर्व युवाराज पारस शाह र प्रहरीबीच लफडा
विवाद मिलाउन शीर्ष नेताबीच छलफल सुरु
ब्राह्मण समुदायबाट सेनामा भाग्यमानी जर्नेलको नेतृत्वः पूरा होला त परिवर्तनको अपेक्षा ?
जीवन विकास लघुवित्तसहित सात कम्पनीको शेयर खरिद माग उच्च, कुनको कति ?
कोरोनाबाट पछिल्लो २४ घण्टामा थप ३३ जनाको मृत्यु
लकडाउन फोबिया, बालबालिकाको भविष्य र अबको समाधान
यो हो एमसीसी भित्रको वास्तविकता
दार्चुला घटनाको वास्तविकता सार्वजनिक गर्न कांग्रेसकाे ध्यानाकर्षण
होटलबाट २२० डोज खोपसहित स्वास्थ्यकर्मी नियन्त्रणमा
सिसिएमसी: महामारीको पछिल्लो अवस्था र आगामी रणनीतिबारे छफफल
दार्चुला घट्नाको छानवीन गर्न गृहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन